Soomaalidu Ma u baahantahay Idaacado Lagadhageysto Internet-ka? | wariyaha
Soomaalidu Ma u baahantahay Idaacado Lagadhageysto Internet-ka?
July 24, 2015 | Filed under: AQOONTA,BARO SAXAAFADA,BULSHADA | Posted by: admin
Soomaaliya war-baahinta maqalku waxaay ka bilaabatay Sanadkii 1945 kolkaasi oo magaalada Hargeysa laga furay Idaacaddii ugu horeeysay oo la oran jiray KUDHU Radio waxaana hormarinteedu socotay ilaa sanadkii 1955.
Inkastoo idacaddaasi ay marxalado kaladuwan soomartay haddana xilligaasi way adkeeyd in howlaha war-baahintu dhinackasta ka hormaraan waxaana taa kadareemikartaa marxaladihii kala duwanaa ee ay soomareen Idaacadaha Soomaaliya sida KUDHU radio oo markii danbe iskubedashay Somali Radio iyo Radio Muqdisho oo isna la aas aasay sanadkii 1951 waxaa labbadaba laga dhageysanjiray hirarka gaagaaban(Shortwave) SW-da ee meelaha fog fog lahadla.
Idaacadaha lagadhageysto hirarka FM(frequency modulation) wax ay Si xowli ah Soomaaliya uga bilowdeen sagaashamaadkii ilaahadana iyaga ayaa la isticmaalaa taasoo meesha kasaartay isticmaalka Mowjadaha gaagaaban ee aan kor kusoo xusnay.
Haddaba su’aasha mudan in aan iswaydiino ayaa ah ” Ma u baahanahay in aan intaas ka sii hormarino Idaacadaha Soomaaliya maxaanse ubaahanahay inaan adeegsano si loola jaanqaado isbedelka war-baahineed ee caalamka kajira?
Idaacadaha hadda laga isticmaalo Soomaaliya oo looyaqaano (Traditional Radios) ama war-baahin dhaqameedka waxaa ay gaarikaraan dad aad u yar marka la barbardhigo idaacadaha casriga ah ee la socda taknolojiyada sida Online Radios iyo Satellite Radios.
Waa maxay Online Radios?
Online Radios waa idaacado kushaqeeya Internet-ka oo ay dhageysankaraan dadka heysta Internet-ka iyagoo isticmaalaya kumbiyuutaradooda, Taleefoonadooda gacanta, iyo Gaadiidkooda sida baabuurta, tareenada, doomaha iwm.
si kale hadaan u sharaxno online radio oo sidoo kale looyaqaano Internet Radio wuxuu ku gudbaa internetka oo ah halka tuureysa codka lagasiidaayo Idaacadaani si lamid ah sida anteenadu u la liso idaacadaha laga dhageysto FM-yada.
Sanadkii 1993 ayaa markii ugu horeysay dunida laga isticmaalay Idaacad qaabkaan oo kale kushaqeysa waxaana lagu bilaabay sidii barnaamij oo kale iyadoo laga dhageysanayay kumbiyuterka.
Tan iyo xilligaasi idaacadaha qaabkaan u sameysani waa sii hormarayeen iyagoo ka faa’iideysanayay isbad bedelka taknolojiyada casriga ah.
Dhageysiga Idaacadaha ku shaqeeya internet-ka ayaa kasaramaraya Idaacadaha kale ee FM-yada Ama AM-yada dalal badan oo uu mareykanku kamid yahay waxaana sii fududeeynaya in idaacadaha kushaqeya internet-ku soobataan qofkasta oo heli kara mobile leh internet.
Sanadkii 2013-ka ayaa bahda Wariyaha.com waxaay si tijaabo ah kusoodareen sahabkada Idaacad kushaqeyneysa internet-ka oo ladhageysankaro xilliyo kooban taasi oo saamaxday in dad kala jooga qaaradaha aduunka ay si toos ah ula socdaan barnaamijyo kooban oo ka baxayay idaacadaasi.
Idaacadaasi oo muddo kooban hawada kujirtay ayaa waxaa markale dib hawada ugusoolaabatay Bishii waxaayna noqoneysaa Idaacaddii ugu horeeysay ee ah Internet Radio oo muddo 24 saac ah si live ah looga dhageysto Internet ka. DHAGEYSO LIVE
IFIYE RADIO oo weli qaab tijaabo ah hawada ugu jirta ayaa waxaa muddadaasi bisha ah dhageystay in kabadan 10 kun oo Soomaali joogta meelo badan oo caalamka ah iyagoo isticmaalya computer-ka, Mobile-kaiyo Baabuurtooda.
Dadka jooga dalalka Mareynkanka iyo Canada waxaa Ifiye Radio ka dhageysankraan baabuurtooda iyagoo adeegsanya App-ka ugu caansan caalamka ee lagadhageysto Idaacadaha Online -ka ah ee looyqaano Pandora …Halka Dadka jooga caalamka intiisa kale ay ka dhageysankaraan Mobile-kooda iyagoo adeegsanaya App-ka caanka ah ee Looqaano TuneIn.
Hadaad isticmaasho taleefoonada casriga ah sida iPhone ama android waxaad soo dajisankartaa APP-ka magciisu yahay TuneIn Radio kadibna qeeybta wax laga baarto ee App-kaasi ku qor IFIYE RADIO waxaa kuusoobixi doona Idaacadda IFIYE RADIO (Somali Internet Radio).
Sidoo kale waxaad booqan kartaa website-ka idaacadaasi oo ah www.ifiyeradio.com oo aad ka helidoonto macluumaad kusaabsan idaacadaasi.
“Waxaan rajeyneynaa in dhawaan aan arkidoono Idaacado badan oo lamid ah IFIYE RADIO oo kusoo kordha War-baahinta Soomaaliya si looga faa’iideysto aqoonta ay leeyihiin dadka jooga qurbaha oo aysan suura gal u ahayn in si too ah ay uga qeybgalaaan barnaamijyada kabaxaya idaacadaha kuyaala dalka gudihiisa oo iyagu shaqeeya xilliyo kooban 12 saac sababo laxiriira Dhaqaalaha ama ammaanka dartood” ayuu yiri Maxamed Cabdullahi Siidii oo ah aas aasaha Idaacadaan.
Faa’idooyinka ay leeyihiin idaacadaha ku shaqeeya internet-ka waxaa kamid ah in ay shaqeynkaraan muddo afar iyo labaatan saac ah iyaga oo lahadlaya dad jooga qaarado kala duwan oo caalamka ah lana jaan qaadi kara kaladuwanaashaha xilliyada .
Waxaay si toos ah usootabinkaraan dhacdooyinka markaas socda iyadoon loobahneyn in la isticmaalo Studiyooyin waa wayn iyo qalab culus oo tiro badan balse loobahanyahay oo kali ah Computer ama Mobile tiiyoo Soomaalidu ay xilliyadii danbe u badatay isticmaalka internet-ka oo aad arkeyso dhalinyaro inta badan waqtigooda kubixiya isticmaalka mareegta internet-ka taaso ka jawaabeysa su’aasheenii ahayn Soomaalidu ma u baahntahay Idaacado kushaqeeya Internet-ka?
Tusaale ahaan qofkastaaba wuxuu dhageysankaraa IFIYE RADIO isagoo isticmaalya waxyaabihiisa kale sida FACEBOOK, TWITER IWM.
Haddii aad heyso wax su’aal ah oo kusaabsan idaacadaan IFIYE RADIO ama guud ahaanba Internet Radio fadlan laxiriir Maamulka oo laga helo emailkaan ifiyeshow@gmail.com .